Internal လိပ်ခေါင်း - ကုသမှု
သောကြောင့်အထူးကုမှကုသမှုကို delay လုပ်ခြင်းလိပ်ခေါင်းခံစားနေရပြီးအရှက်ကွဲများစွာသောလူများ၏။ ရောဂါတိုးကိုရပ်တန့်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးထိုသို့သောပေါ့ပေါ့သဘောထားဆိုးသောရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ပြည်တွင်းရေးလိပ်ခေါင်း၏ကုသမှုများအတွက်ပေမယ့်တစ်ခုသာအထူးကု၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်, လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရိုးရာကုစားနိုင်ပါတယ်။ Self-အကဲဖြတ်ရန်ရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုစက်ရုံတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစေရန်သေချာစေပါ။
anoscopy, နိမ့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းစီးရီး, colonoscopy သို့မဟုတ် sigmoidoscopy - တိကျမှန်ကန်သောရောဂါစအိုလမ်းကြောင်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စာမေးပွဲအဖြစ်ဆာပနည်းလမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီး proctologist နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစာမေးပွဲမတိုင်မှီတစ်သန့်စင်စေရန်လိုအပ်ပါသည် enema ။
ကုသမှုများအတွက်ရောဂါ၏စင်မြင့်ပေါ် မူတည်. ရှေးရိုးစွဲသို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ရောဂါမျှမျှတတအလွယ်တကူကုသနေပါတယ်။ တောင်မှပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင်အမြဲချက်ချင်းခွဲစိတ်ကုသဖို့ရောကျလာနှင့်ရှေးရိုးစွဲကုထုံးကိုမသုံးနေကြသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း၏အမှု၌ဖျော်ဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံမှာကုသမှုများအတွက်အရေးတကြီးအရိပ်အယောင်တစ်ခုပြည်တွင်းရေးသွေးထွက်လိပ်ခေါင်း, thrombosed လိပ်ခေါင်းနှင့်လည်း jamming နဲ့ပါတ်သက်များ၏အန္တရာယ်နှင့်အတူဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ပြည်တွင်းရေး node များ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးလွှတ်ခြင်းနှင့်ရောဂါ၏ exacerbation ကုသမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအူရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်ကြာကာလအတွင်း။ ချုပ်ရှောင်ရှားရန်ဖိုင်ဘာကြွယ်ဝသူမ၏စက်ရုံအစားအစာများအတွက်သိသာထင်ရှားသောနေရာအရပ်မီးမောင်းထိုးပြ, အစားအသောက်ကိုထိန်းညှိသင့်ပါတယ်။ အစားအသောက်များတွင်အဆိုပါ laxatives ကခန့်အပ်သည့်ကုလားထိုင်, ပုံမှန်ဖို့လုံလောက်တဲ့မပါလျှင်။ ဒါဟာသွေးထွက်လိပ်ခေါင်းဆား laxatives ယူ. မသွားနိုင်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။
ပြည်တွင်းရေးလိပ်ခေါင်း၏ကုသမှုများအတွက်အမျိုးမျိုးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနေသောခေါင်းစဉ်: suppositories (suppository), ဆီ, တက်ဘလက်။ Suppositories (Indomethacin ကယ်ဆယ်ရေး, Anestezol) စအိုလမ်းကြောင်း၏မြင့်မြင့်အတွက်ချွဲအမြှေးပါး၏လိပ်ခေါင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများနာကျင်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဒေသခံပွော့အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးနိုင်စွမ်းဆီသည် (Heparin, Troxevasin, ichthyol) ။ ပြည်တွင်းရေးလိပ်ခေါင်းဆီမွှေးကိုအထူးအစွန်အဖျားနှင့်အတူမိတ်ဆက်သောအခါ။ ပါးစပ်အသုံးပြုမှုအတွက် tablet များ၏လှုပ်ရှားမှု (Detraleks, Phlebodia, Vazoket) အဓိကအားဖြင့်သွေးစီးဆင်းမှုနဲ့သွေးကြောမြို့ရိုးကိုအားပေး၏ပုံမှန်မှညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒေသခံကုသမှုအဓိကလိပ်ခေါင်းသွေးပြန်ကြောထဲကနေသွေးထွက်ရပ်တန့်ရန်ညွှန်ကြားသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, hemostatic ဖယောင်းတိုင် (thrombin, epinephrine) အဖြစ်စနစ်တကျသက်ရောက်မှု (Vikasol, Hemoroidin) အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ တစ်ဦးစွန့်စားမှုလည်းမရှိရှိရာကိစ္စများတွင်ပြသသွေးထွက်နှင့်အတူပြည်တွင်းရေးလိပ်ခေါင်း၏အော်ပရေတာကုသမှု သွေးအားနည်း ဟေမိုဂလိုဘင်အဆင့်ဆင့်နှင့်လျော့ချရေး။ ဟေမိုဂလိုဘင်တစ်ချွန်ထက်တစ်စက်နှင့်အတူလိုက်တဲ့အခါသိသာအသွေးသည်အရှုံး, စစ်ဆင်ရေးကိုချက်ချင်းထွက်ယူသွားတတ်၏။ သွေးထွက်ရပ်တန်၏နောက်ထပ်နည်းလမ်းနောက်ဆက်တွဲအမာရွတ်နှင့်အတူ node ကိုသွေးခဲဖြစ်ပေါ်စေအတွင်းပိုင်းလိပ်ခေါင်း sclerosing ဖြေရှင်းချက်သို့မိတ်ဆက်စကားပါဝငျသညျ။
ultrasound လမ်းညွှန်မှုနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်သွေးလွှတ်ကြော suturing ။
ကုန်ကြမ်းအာလူးဖယောင်းတိုင်: ညဥ့်မှာစအိုထဲသို့ဖြည့်စွက်တဲ့ rectal suppository ၏အရွယ်အစားနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးဖယောင်းတိုင်ကနေဖြတ် peeled အာလူး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့်အတူကနိန်။
ရေခဲပြင်ဖယောင်းတိုင်သာမန်ရေနာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်အသုံးပြုငယ်လက်ချောင်းရော်ဘာလက်အိတ်ထဲမှာအေးခဲဖို့နဲ့ 1 များအတွက်စအိုထဲသို့မိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံသွေးထွက်ရပ်တန့်ရန် -2မိနစ်။
beetroot ဖျော်ရည်နှင့်အတူ Microclysters: 30 - စအိုလမ်းကြောင်းသို့ညဉ့်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ lukewarm သီးဖျော်ရည်၏ 50 ml ။
Meksidol ကူညီပေးသည်ဘယ်အရာကိုမှ၎င်း, ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးဝါးမှုပုံစံအားလုံးကိုသုံးစွဲဖို့?
Peptic အစာအိမ်နာ - ရောဂါလက္ခဏာ
ရင်တုန် - အကြောင်းရင်းများ, ကုသမှု
Cefotaxime - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
Hypothyroidism ၏ကုသမှု - Endonorm
Eardrops Otofa - ဘယ်လောက်မှန်မှန်ကန်ကန်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့?
ဆံပင် follicles ရောင်ခြင်း
အဆိုပါကလေးသည်3နှစ်အတွင်းစကားမပြောပေ
Meg Ryan တိုနီဆုပေးပွဲအသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲပရိသတ်ထိတျလနျ့
စတိုင်ပေါ့ပေါ့ - ဘယ်လိုအခြေခံနှင့် capsular ပေါ့ပေါ့ဗီရိုဖန်တီးနည်း
သူနာပြုမိခင်များအတွက် mastitis ၏လက္ခဏာများ